Wonke umfazi ufuna ukukhangeleka naluphi na ixesha lonyaka. Ekubeni ekwindla akude kude, kulufanelekile ukucinga malunga nomcimbi wokuhlaziywa kwe-wardrobe, kwaye ngenxa yolu uza kufuna ulwazi lohlobo lwefashoni yeli xesha, esiza kuthetha ngalo namhlanje.
Ixesha lekwindla-ebusika lika-2012-2013 linikeza izinto ezahlukeneyo zabasetyhini. Kulo xesha ungazama nokudala imifanekiso enomdla kakhulu. Ngenxa yoko, unokukhetha enye yezindlela ezinikeziweyo okanye mhlawumbi uzigqoke.
Umqhubi wokuqala: "Ibhola emnyama"
Nangona ihlobo lidlulileyo kwimifanekiso ecebileyo nemibala, abaqulunqi beza kwisigqibo sokuba isigxina sesibini sifanele sichaze ubusika obusondela ngeendlela ezimnyama. Ukugweba ngabo bonke, amandla othotho lwe-gothic, kwaye sikwazi ukubona oku kwizinto ezininzi. Umzekelo: iingubo ezahlukeneyo, iingubo, iinqwelo ezivela kwiVercece, iValtoino, i-Yohji Yamamoto, iRoccobarocco njalo njalo.
Ixesha laseGothik ekwindla-ebusika2013-2014 lenziwa ngokuhlanganisana kwezixhobo ezahlukeneyo ezizodwa: i-long-handlee, iminqamlezo njalonjalo.
Indlela yesibini: "Iinjongo zeMpuma"
Akukho umbala omnyama kuphela oza kuba ngowama-2013. Izithethe zaseMpuma ziya kuthatha indawo yazo elangeni kwaye zikulungele ukuzisa izinto ezintsha. Ngaloo ndlela: iinkcukacha ezahlukahlukeneyo zangaphambili, izisombululo ezingaqhelekanga zombala, izicwangciso ezicwangcisiweyo kunye nezityebileyo, ukunqunyulwa okunomdla kunye nokunjalo. Ezi zinto unokuzibona kwiiqoqo Zac Posen, uJason Wu, Osman, Roccobarocco.
Intambo yesiThathu: "Isitayela seMilitaristi"
Kule ndlela, i-half-offer offer is to spend in the days of autumn in clothes with silhouettes closed. Yaye inxulumene nazo zonke iintlobo zeengubo: iingubo, izambatho, iebhatyi, njl. Ngelo xesha, iimpahla zinobuninzi kumaqhosha, amabhande amabhanti amaninzi, amanqabana ahlukeneyo, iintambo zegxeni, iikholeji. Imibala ingcono ngokumnyama: emnyama, khaki, emdaka, emhlophe, njl. Iimodeli ezifanayo ziboniswa ngabayili beenkampani: uVictoria Beckham, uValentino, uSalvatore Ferragamo, uTommy Hilfiger. Ukuba unxibe umfaniswano, ngoko yile nto iingubo ezifana nesimo somkhosi esiya kulungele wena.
Indlela yesine: "Isikhumba"
Isikhumba, njengento enye, ihlala isisombululo esiphumeleleyo nesisetyenziswayo kwixesha ngalinye. Yonke imbali yefashoni, akukho nanye yayingenazo iimveliso zesikhumba - oku kuyindlela ekhethekileyo. Kulo nyaka unxibe unxilongo kwaye ngelo xesha unxibe ingubo eqinileyo yesikhumba. Ukwindla-ebusika 2013-2014 kwazisa uluhlu olubanzi: ibhulukhwe, iingubo, iigebengu, iiglavu, izicathulo, izikhwama. Ukubetha kwenkathi yesikhumba sesikhumba, kwaye le yinto yokudala: "ipencil", iifom e-asymmetrical, iigrits, eziye zenze i-embellishments. Kwakhona, kukho izikhwama eziqhelekileyo ezingenazo izixhobo okanye, ngokuchaseneyo, zihlotswe ngekristal. Iimodeli ezinomdla kakhulu kule nkathi zizinto ezivela kwiifemu u-Osman, uFendi, uFrancesco Scognamiglio.
Indlela yesithandathu: "I-Fur"
Njengoko kungekho mveliso yesikhumba, akukho buswele abukwazi ukuhanjiswa kunye, kuba le nto ibonakala ihle kwaye idlala. Unomsebenzi, ulungele kwaye unenani elikhulu labalandeli phakathi kwesondo esihle. Ngoko awukwazi ukukhangeleka nje kuphela, kodwa uziva ukhululekile. Ubushushu bufudumala, buyinto evuyayo kwiva, inqabileyo, i-fluffy neyomhlaza. Iimveliso ze-Fur kulo nyaka zinemibala eyahlukahlukeneyo: i-blue, lilac, i-raspberry, i-blue, i-yellow kunye nabanye. Kuzo zinto unako ukongeza isikhwama somqulu webhubhu, umzekelo, ukusuka eBlumarine. Iingxowa kunye nezinye iingubo zikhethwe ngombala omnye okanye ukuze imibala yomnye ihlanganiswe ngempumelelo kwaye ifike kwimvelaphi efanayo. Kukho izicathulo zobomi, okulungileyo ukugqiba umfanekiso. Uyakwazi ukubona imodeli kwiqoqo le-Alexander McQueen. Izinto ezinjalo ziyakunceda ukuba uphume kwisihlwele.
Indlela yesithandathu "iVelvet"
Iimveliso ezenziwe nge-velvet zazihlala zihle, zizintlu kwaye zincinci. I-Velvet iyinto ekhethekileyo yokutshiza iingubo zangokuhlwa. Kodwa ngexesha lokuthungatha lifikile ekugqibeleni ukuba izambatho ze-wardrobe zansuku zonke ziya ku funeka. Imizekelo ibonakala kwimisebenzi ka-L'Wren Scott, uGucci, uPaul Smith, uRalph Lauren, uBotgaga Veneta.
Inombolo yokuhamba phambili yesisixhenxe: "Impahla eyaziwayo"
Ewe, apho ufike khona kumfazi kwiqanda elibandayo ngaphandle kwezinto ezixubileyo. Unokufuna iimfestile, iimpahla zokugqoka, iigradi, izikhwama, iinqayi okanye ubuncinci into eluhlu. Kukho iindaba ezilungileyo: zonke ezi zinto azikhenkce ngokukodwa kulo nyaka ngokuthelekiswa nazo zangaphambili, ngoko ziveliswa kwiindidi ezahlukeneyo kunye nemibala. Ngexesha langoku, i-essential things knitted is coziness and warmth, kwaye ubude kunye nokubunjwa kukhethwe ngabanye, kuba ibhinqa lelo bhinqa linomdla kunye neemfuno zayo. Abakhi behlabathi abaninzi baye bakhupha iikholeji zabo kule ndlela: StellaMcCartney, EmilioPucci, YohjiYamamoto, JulianaJabor, Just Cavalli nabanye.
Okwesithathu: "I-Pajama ifanele kwisitayela se-pajama"
Nangona kunjalo ingaqhelekanga, kodwa iqoqo eyaziwayo sele livelise i-packet ye-trouser suit in pajamas: Prada, Louis Vuitton, Miu Miu, Rochas, StellaMcCartney. Ukwahlula phakathi kwoluhlobo lweengubo yinto esemgangathweni kunye nokuthobeka kwezinto ezibonakalayo. Kodwa iingubo zinezinye iimpawu ezihlukile: umbala oqaqambileyo, uhlobo oluthile lokuprinta, njl. Abaqulunqi bacebisa ukugqoka iimpahla ezifana neziboniso ze-monochromatic, ezifana neentonga kunye neebhola. Oku kuya kukunceda ukulinganisela ingubo, ukukhangeleka kakhulu, kodwa ngokuchaseneyo, kuhle kwaye unako. Kukho enye inketho: umdlalo wokungafani. Thatha i-blouse nge patheni eyahlukeneyo kwaye uya kukhangeleka. Olu hlobo aluyikukushiya lungaqapheli kwaye luya kutsala imibono yamadoda nabasetyhini, kodwa liza kuphakamisa iimo, kuba loo nto ibonisa ingqiqo yomnini wayo.
Okwenyani kweli xesha luneempendulo ezide zenziwe ngekhanda eliphezulu. Bafanele bafanise umgca we-¾. Unokukhetha umbala ngokwakho, kwaye akufanele ufanane neengubo zangaphandle, ungathatha imibala edibeneyo. Kwiintengiso uza kubona omnyama. Ubomvu, eluhlaza, obomvu, obomdaka, obomvu, obomvu kunye nezinye iiglavu ezinemibala. Izixhobo ezifanayo kunye nezinye zihanjiswa kwiiqoqo zeMarios Schwab, iTemperley London, iNdlu yaseHolland, iLunvin, i-Missoni. Kukho iiglavu zanamhla kunye neendlela ezincinci.
Iinqanawa zezona zintle kakhulu
Esinye sezixhobo eziphambili zeklasi ekwindla-ebusika ngo-2013-2014 ziihappy. Ubume kunye nesimo seentshathi. Ngokomzekelo, izigqoko ezinkulu ezenziwe ngoboya kuMarc Jacobs. Kukho nabantwana besifazane kwi-retro amandla-uCloe, zenziwe ukuba zibukeke njenge-1920s. Imvelaphi ekwahlukileyo i-cowboy i-Moschino. Abamemezeli bobugqwetha baya kulandela imodeli ye-asymmetric evela eMarios Schwab. Kodwa oku akupheli apho okanye njengokuba kulo nyaka unkulu kakhulu.
Ekupheliseni inkcazo yeendlela, izitayela kunye nemifashiso yefashoni, ndingathanda ukuphawula ukuba ukhetho oluphambili kumfazi ngamnye uya kuba yinto evumelana naye. Mhlawumbi unesimo sakho sangaphakathi, apho uziva ukhululekile, ukhululekile kwaye ukhangeleka. Jonga kakuhle ukuba abo bafazi besaba ukuzama, baye kwintlanganiso kunye nomnye, kodwa ngelo xesha bawatshintshe izithethe zabo.
Ngaphandle kwemida: iingubo zokukhawulwa kwamahhala - umkhwa wangaphambili-2016
Yiba yinto ekhethekileyo: iingubo ezibomvu zonyaka omtsha
Imithetho e-3 yomgca wecala lokubhinqa ngamabhinqa anamafutha
Indlela yokuphatha emisebenzini ukuhleba
Ukucoca amathambo, isibindi kunye neentso emva kwebusika
I-Pasta ene-eggplant kunye neetatayi
I-pancake entle kunye noshizi
I-cocktail ye-tomato ne-avocado
50 Iimveliso ezininzi eziNcedo
Iiklasi zokulungiswa koyiko lwabantwana
Ukuba umntu uyesaba ukuba yedwa kunye nomfazi
Isaladi kunye nesaladi ye-rocket, inkukhu kunye needrafruit
Amagama amahle okubonga ngutitshala wontanga - kubazali kunye nabantwana-kwivesi kunye neprose